संसारको सबैभन्दा ठूलो डस्टबिनः फोहर जहाँसुकैको होस्, फालिन्छ यही सहरमा (फोटोफिचर)
HOME » संसारको सबैभन्दा ठूलो डस्टबिनः फोहर जहाँसुकैको होस्, फालिन्छ यही सहरमा (फोटोफिचर)
एजेन्सी। के तपाइँलाई थाहा छ ? संसारमा सबैभन्दा धेरै फोहर थुप्रिने ठाउ कुन हो ? संसारमा सबैभन्दा कम फोहर स्वीडेनमा फालिन्छ भने सबैभन्दा बढी फोहर थुप्रिने ठाउँ हो इजिप्टको वार्ड मंसियत । यो सहरलाई गार्जेब सिटी अर्थात फोहरको सहर भनेर पनि चिनिन्छ । यहाँ जताततै फोहर मात्र देखिन्छ । यहाँ सडकदेखि घरमा पनि फोहर छरिएको देखिन्छ ।
यहाँ आसपासका सहरबाट फोहर ल्याइन्छ र यहाँ त्यो फोहरलाई प्रशोधन गरिन्छ । यही कारण यो सहरमा यति धेरै फोहर देखिन्छ । यो सहरमा करिब ६० हजार जनता बसोवास गर्छन् । यो फोहर काहिरा महानगरका कारण थुप्रिने गर्छ । यो महानगरको आबादी झण्डै २ करोड छ । तर, यो महानगरमा फोहर उठाउने व्यवस्थित प्रणाली भने छैन ।
यहाँका फोहर उठाउने कामदारहरु घरघरमा गएर फोहर जम्मा गर्छन् र यसवापत सामान्य पारिश्रमिक लिन्छन् । विगत ७० वर्षदेखि यहाँको फोहर उठाउने प्रणाली यस्तै छ । यो फोहरलाई ट्रकमा राखेर मंसियतसम्म ल्याइन्छ । त्यसपछि महिला र बालबालिकाले त्यो फोहर छुट्याउँछन् । स्वास्थ्यका दृष्टिले यहाँको वातावरण निकै हानिकारक भए पनि यसको विकल्प भने अहिलेसम्म खोजिएको छैन ।